BEERINTA BRACHICOME: MUUQAALADA BEERASHADA IYO DARYEELKA (SAWIR LEH) - DHIRTA SANADLAHA AH
Dhamaan dadka haysta shakhsi shakhsi ah ayaa si joogto ah u raadinaya ubaxyo cusub. Waxaan soo jeedineynaa inaanu fiirino brahikomu - warshad xiiso leh oo u baahan dayactir yar oo waqti isku mid ah midabkeedu uu midabkiisu yahay muddo dheer, si kastaba ha ahaatee, illaa iyo hadda, waxay ku raaxaysatay wax yar.
Brahicom Waxaa iska leh qoyska Aster oo ah hal sano oo ah dhirta abaarta u adkeysata, oo ah goobta dhalashada Australia. Sababtoo ah tan, ubaxa waxay dareemeysaa weyn gobollada kulul, halkaas oo ay ku kori karto dhowr sano oo isku xigta. Si kastaba ha ahaatee, weli waxay leedahay cillad: brachikoma uma dulqaadanayo qabow, iyo, sidaa darteed, beerashada buuxda, waxaad yeelan doontaa awood ku filan on the abuur iyo geedo.
Sidoo kale brachikome, qoyska Astrov waxaa ka mid ah dahlia, rudbeckia, osteospermum, doronicum, cineraria, gelenium, ageratum, helihrisum, mordovnik.
Ubaxa ubaxu wuu dheeraa oo hodan yahay. Noocyo ciriiri ah oo caan ah oo ka soo baxa stem, ilaa 100 ubax. Heerka baadiyaha waa yar, ugu badnaan 30 cm. Waqtiga ubaxu waa muddo dheer - laga bilaabo Julaay ilaa Sebtembar. Iyada oo ku xiran darajada la xushay, sawirkaaga ayaa lagu qurxin doonaa ubaxyo kala duwan. Sawirada ubaxyada brachicome ayaa laga arki karaa in dheeraad ah ee this article.
Ma taqaanaa? Magaca "brahikoma" ee Giriigga: "brachys" waa gaaban oo "iman" waa timo. Noocan aan caadi ahayn ee geedka waxa uu u sabab ahaa yaraanta "qanjirada" on abuurka. Australia iyo Jarmalka, brahikomy waxaa lagu magacaabaa buluug illaa aan-aan-ahayn.
Cinjirka brachicome waa 50 nooc oo ubax ah. Si kastaba ha ahaatee, beeralayda waayo-aragnimo jecel yahay brakhik soo saaraha, sababtoo ah dhammaan noocyo kale ayaa ku salaysan. Maanta noocyo noocaas ah ayaa loo yaqaan:
"Muuqaal qurux badan";
Si ubaxyada brachicomes kuugu farxaan adinkooda quruxdooda inta ay suurtagal tahay, waxaa muhiim ah in si wanaagsan loo koro ka dibna waxaad u sheegi kartaa qof kasta oo ka socda beertaada leh sawiro dhalaalaya.
Waa muhiim! Haddii aad qallajisid dusha sare ee seedling marka ay gaareyso 5 cm ee dhererka, waxaad abuuri kartaa kubad buuxda oo ka timaada dhirta sababtoo ah jardiinada sare ee baadiyaha.
Goobta soo degta waa inay ku taallaa qaybta koonfureed, halkaas oo uu jiro iftiin badan iyo kuleyl. Si kastaba ha ahaatee, tani waa in sidoo kale loo xakameeyo si kulaylka ah ee maalinta ma dhaawacayso geedka.
Nooc kasta oo khafiif ah oo ku habboon koritaanka wuxuu noqon karaa mid hodan ku ah nafaqooyinka. Si loo hagaajiyo ciidda loogu talagalay khubaro beereedka ku talinaynaa in la qaato walxo ka kooban humus, carrada caleen iyo ciid. Waxay noqon doontaa dheecaan waxtar leh, oo ka kooban jajab.
Brachicome kicinta laga bilaabo abuur
Seeds for beeritaanka xiga waxaa la goostay September, waxay biqilka waxay sii jirayaan ilaa 3 sano. Inta badan waxay ku bixiyaan ubaxyo cusub oo ka soo baxa noocyada abuurka "Brakhikom diri liiska". Dhirta Kuwani waxay Bloom muddo dheer, iyo daryeel iyaga marka aad u baahan tahay ugu yaraan. Tixgeli waxaad u baahan tahay beerista haboon ee ubaxyadaas.
Ma taqaanaa? Haddii aad ku beerto miraha brachikome dayrta iyo abuuro xaalado ku habboon geedka, waxa uu Bloom doonaa xilliga qaboobaha oo wuxuu ku farxi doonaa milkiilayaasha lagu koriyo iyo jardiinooyinka jiilaalka.
Diyaarinta taangiga, substrate, abuur
Brahikomu waxay bilaabaan inay koraan dhamaadka jiilaalka. Abuurka ayaa aad u yar, laakiin aad u adag oo waqti isku mid ah uma baahna daaweyn gaar ah iyo diyaargarow. Waxa kaliya ee loo baahan yahay in la sameeyo waa in lagu daro qalabka beeraha oo ciid ah ka hor beerashada. Brahikom waxay jeceshahay dhulalka bacriminta iftiinka leh falcelin yar oo acid ah, laakiin substrate ayaa si sahlan loo diyaarin karaa adiga. Ujeedadu waxay noqon doontaa isku dhaf ah dalag caleen ah, ciid, humus iyo soodhad oo ah saamiga 1: 1: 2: 3. Si biqilka, abuurka waxaa la geeyaa weel gaar ah. Tani waxay ku habboon tahay weelasha caadiga ah. Dhulka waa qasab ka hor qoyan.
Iyadoo beeritaanka habboon ee abuurka, ubax dhacdaa celcelis ahaan 75 maalmood ka dib. Ogaanshaha xeerarka aasaasiga ah ee brachicomes sii kordhaya miraha, dad badan ayaa ku weydiin doona goorta iyo sida si habboon u beeri on geedo. Seeds lagu beeray dhamaadkii Maarso ee isku dar ah ciidda si gaar ah loo diyaariyay, taas oo horay loo waraabiyey xal fudud oo ah kiniinka potassium. Sanduuqyada waa la daboolay oo meel dhigay diirran. Calaamaduhu waxay muuqdaan todobaad kadib. Waqtiga oo dhan waxaa lagula taliyaa in lagu hayo heerkul ah qiyaastii 20 ° C, si loo siiyo waraabinta iyo hawo-qaadidda. Waxaas oo dhan waa la fuliyaa ilaa muuqaalka 3 caleemo run ah.
Heerka xiga ee xannaanada ayaa ah quus. Haddii aad rabto inaad ka gudubto marxaladan, markaa waxaa lagula talinayaa in lagu abuuro miraha digirta peat ee 3 qaybood kasta. Haddii miraha lagu beeray dillaac, ka dibna marxaladdan waxaa lagu shubaa weelal qoto dheer fogaan ah 5 cm midba midka kale. Waxaa lagama maarmaan ah in si taxadar leh loo soo celiyo, qaadashada dhirta si ay u jirto buro dhul ah oo ku yaal xididada. Daryeelka xiga waxaa weeye in biyo dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah la isticmaalo.
In geedo dabiici ah furan yihiin beeray dabayaaqadii May, fogaan ah oo ka badan 15 cm midba midka kale. Waa muhiim in la hubiyo in xididada la ilaaliyo kubbadda asalka ah. Ka dib markii la beero, dhulku waa mid is dul saaran oo la waraabiyaa.
Waa muhiim! Haddii aadan soo ururin abuurka waqtigeeda, ha ka welwelin. Brahicom waxay si fiican u soo saartaa is-abuurista, taas oo ka dhalatay tirada ubaxyada cusub oo kor u qaadi doona sanadka soo socda. Tani waa in la xusuusto haddii sanadka soo socda aad rabto inaad ku beddesho ubaxyadaas meel kale oo beerta ah.
Hababka kale ee taranta
Marka lagu daro miraha brachikomea faafin by gooyn. Si loo kaydiyo tijaabada ugu wanaagsan, si loo kordhiyo tirada ubaxyadaas ku yaal aaggooda, dhirta uterine-ka ayaa loo wareejiyaa dhismaha xilliga qaboobaha, halka laga jarayo caleemaha oo dhan kala badh. Wixii jiilaalka waxaa lagu talinayaa in ay doortaan meel qurux badan, laakiin qabow halkaas oo dhirta mar mar la waraabiyo. Guga geedka waxaa la gooyaa gooyn iyo rujin ee substrate iftiin. Bishii Maajo, dhammaan dhirta xididada waxaa lagu beeray dhul furan ama weel gaar ah oo ay koraan.
Hadda waxaad taqaanaa goorta iyo sida loo abuuro abuurka, ka dibna ka feker nooca daryeelka ee loo baahan yahay for brachicome ka dib markii laga beerto. Brahikom - warshad aan qabin oo aan u baahnayn daryeel gaar ah. Si kastaba ha noqotee, xaaladaha qaarkood waa in la buuxiyaa si ay dhirta si buuxda u horumariyaan uguna bloomo, sida sawirka.
Waxay bilaabaan inay nuugaan ciidda saacadaha ugu horreeya ka dib markii la beero, laakiin arrintani waa muhiim inaanay dhaafin - ubaxa waxay u badan tahay inuu ku dhaco abaar yar oo ka badan qoyaanka.
Dhirta sida euphorbia, poinsettia, sunflower, stptocarpus, martida, argirantemum ayaa sidoo kale aan ku adkeyn karin qoyaan dheeraad ah.
Brahikom uma baahna quudin joogto ah. Xilliga oo dhan, waa ku filan in lagu daro 3 jeer bacrimin adag oo loogu talagalay dhirta ubaxyada. Waxay noqon doontaa mid waxtar leh in lagu daadiyo duurka ku wareegsan duurka.
Kuurkan waxaa la sameeyay iyadoo la jiidayo sare, taas oo keeni doonta in la kordhiyo branching iyo muuqaalka tiro badan oo inflorescences ah.
Cudurada Dhirta iyo Cayayaanka
In kasta oo xaqiiqda ah in brachycom uu yahay warshad caddaalad daraadeed, haddana mararka qaar waxaa laga qaadaa weerarada cudurada iyo cayayaanka:
Rotting stem and root. Sababta cudurku wuxuu noqon karaa waraabin xad dhaaf ah. Si aad uga takhalusto dhibaatadan, waxaa habboon in transplanting geedka, hubinta dheecaan wanaagsan iyo hubi inaad ka saarto dhammaan waxyeello soo gaartay.
Weerar qaniinyo ah. Buuggan yaryar ee buugyarayaasha waxyeelo, taasoo keenta geerida geedka. Waxaad ka takhalusi kartaa iyaga adigoo ka soo qaadaaya ama ku buufinaya baadiyaha leh celin khaas ah oo laga iibsan karo dukaamada ubaxa.
Guuldarro Whitefly ah. Uumiintiyadu waxay ka tagaan dheecaantooda caleemaha dhirta, kuwaas oo wax cunaya dusha, iyo dirxiga ku quudiya casiirka. Dagaalku wuxuu ku dhacaa caawimaad kiimiko.
Hadda waxaad taqaan dhammaanba ubaxyada sida brachicome. Waxaad ka baratay beerashada iyo daryeelka dambe ee ubaxyadaasi ku yaal berrin furan, waxaa loo tixgeliyaa sawirro xiiso leh oo lagu soo bandhigay maqaalkeena. Doorashadu waa adigaa - dhirta ama ha ku jirin ubaxyada ku yaal qalabkaaga ama balakoonka.